တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် နီပေါတပ်မတော်ကြည်းတပ်ဦးစီးချုပ် General Rajendra Chheri အားဂုဏ်ပြုကြိုဆို၊ တွေ့ဆုံဆွေးနွေး၊ ဂုဏ်ပြုနေ့လယ်စာဖြင့်တည်ခင်းဧည့်ခံ » ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်သည် နီပေါတပ်မတော်ကြည်းတပ်ဦးစီးချုပ် General Rajendra Chheri အား ယနေ့နံနက်ပိုင်းတွင် နေပြည်တော်ရှိ ဇေယျာသီရိဗိမာန်ရှေ့၌ ဂုဏ်ပြု တပ်ဖွဲ့ဖြင့်ကြိုဆိုသည်။
ဦးစွာ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့် နီပေါတပ်မတော်ကြည်းတပ်ဦးစီးချုပ်တို့သည် ဂုဏ်ပြုတပ်ဖွဲ့၏ အလေးပြုခြင်းကိုခံယူကြပြီး ဂုဏ်ပြုတပ်ဖွဲ့ကိုလိုက်လံ ကြည့်ရှုစစ်ဆေးသည်။ ယင်းနောက် အခမ်းအနားတက် ရောက်လာကြသော နှစ်နိုင်ငံတပ်မတော်အရာရှိကြီးများအား အပြန်အလှန်မိတ်ဆက်ပေးကြသည်။
အဆိုပါဂုဏ်ပြုကြိုဆိုပွဲသို့ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့်အတူ ဒုတိယတပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီး ချုပ် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်(ကြည်း) ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးစိုးဝင်း၊ ညှိနှိုင်းကွပ်ကဲရေးမှူး(ကြည်း၊ရေ၊လေ) ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမြထွန်းဦး၊ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်(လေ) ဗိုလ်ချုပ်ကြီး မောင်မောင်ကျော်၊ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ရုံး(ကြည်း)မှ တပ်မတော်အရာရှိကြီးများနှင့် နေပြည်တော်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တိုင်းမှူးတို့ တက်ရောက် ကြပြီး နီပေါတပ်မတော်ကြည်းတပ်ဦးစီးချုပ် နှင့်အတူ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာနီပေါ နိုင်ငံသံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Bhim K. Udas ၊ နီပေါတပ်မတော်အရာရှိကြီးများတက်ရောက်ကြသည်။
ထို့နောက် နီပေါတပ်မတော်ကြည်းတပ်ဦးစီးချုပ်သည် ဇေယျာသီရိဗိမာန် ဧည့်သည်တော်မှတ်တမ်းစာအုပ်တွင် မှတ်တမ်းတင်လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့် ဧည့်ခန်းမဆောင်၌တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေး ကြသည်။
ထိုသို့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရာတွင် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်က ယခုချစ်ကြည်ရေးခရီးစဉ်သည် မြန်မာ-နီပေါနှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးနှင့် တပ်မတော်နှစ်ရပ်အကြားဆက်ဆံရေးအတွက် သမိုင်းဝင်ခရီးစဉ်တစ်ခုဖြစ်ပြီး နှစ်နိုင်ငံချစ်ကြည် ရင်းနှီးမှုတိုးတက်ရေးအတွက်ခြေလှမ်းတစ်ရပ်ဖြစ်ကြောင်း၊ မိမိဦးဆောင်သည့်မြန်မာ့ တပ်မတော်ချစ်ကြည်ရေးကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ နီပေါနိုင်ငံသို့ချစ်ကြည်ရေးခရီး လာရောက်စဉ်က အကောင်းဆုံး ဖြစ်အောင်ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့မှုများအပေါ် ကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်း၊ နှစ်နိုင်ငံနှင့်နှစ်နိုင်ငံတပ်မတော် နှစ်ရပ် အကြား ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုတိုးတက် ခိုင်မာစေရေးအတွက် ဆက်လက်ဆောင်ရွက် သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားသည်။
ယင်းနောက် ဧည့်သည်တော် နီပေါတပ်မတော်ကြည်းတပ်ဦးစီးချုပ်က ယခုကဲ့သို့ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင်၏ ဖိတ်ကြားချက်အရ ချစ်ကြည်ရေးခရီးလာရောက်ရသည့်အတွက် ကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်း၊ နီပေါကြည်းတပ်ဦးစီးချုပ်တစ်ဦးအနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံသို့ပထမဦးဆုံးအကြိမ် လာရောက်သည့်ချစ်ကြည်ရေး ခရီးစဉ်ဖြစ်ပါကြောင်း၊ ယခုကဲ့သို့ချစ်ကြည်ရေးခရီးစဉ်များ အပြန်အလှန် လည်ပတ်ခြင်းဖြင့် နှစ်နိုင်ငံနှင့်နှစ်နိုင်ငံတပ်မတော်နှစ်ရပ်အကြားချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုများ ပိုမိုတိုးတက်ခိုင်မာလာ မည်ဟုယုံကြည်ပါကြောင်း၊ ယခုကဲ့သို့ရင်းနှီးနွေးထွေးစွာကြိုဆိုမှုများကိုလည်း ကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်း ပြောကြားသည်။
ထို့နောက် နှစ်နိုင်ငံနှင့် နှစ်နိုင်ငံတပ်မတော်နှစ်ရပ်အကြားချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှု တိုးမြှင့်ဆောင်ရွက်ရေးနှင့် ကုန်သွယ်မှုမြှင့်တင်ရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ၊ နှစ်နိုင်ငံတပ်မတော်နှစ်ရပ်အကြား စစ်ဘက်ဆိုင်ရာ သင်တန်းများ အပြန်အလှန်စေလွှတ်ရေး၊ ဆေးဘက်နည်းပညာများ၊ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကာကွယ်ရေးနှင့် အခြားကိစ္စ ရပ်များတွင် အပြန်အလှန်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး၊ ယဉ်ကျေးမှုအဖွဲ့များနှင့် အားကစားအဖွဲ့များ အပြန်အလှန် စေလွှတ်ရေး၊ နီပေါနိုင်ငံရှိ ကုလသမဂ္ဂငြိမ်းချမ်းမှုထိန်းသိမ်းရေး သင်တန်းကျောင်းတွင် မြန်မာ့တပ်မတော်မှ သင်တန်းသားများတက်ရောက်ရေး၊ ဘာသာစကားဆိုင်ရာ သင်တန်းများအပြန်အလှန်စေလွှတ်ရေး၊ မြန်မာ နိုင်ငံ၏ထာဝရငြိမ်းချမ်းရေးရရှိစေရန်အတွက် တပ်မတော်မှဆောင်ရွက်နေမှုအခြေအနေများနှင့် နှစ်နိုင်ငံ တပ်မတော်နှစ်ရပ်အကြားချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုတိုးမြှင့်ဆောင်ရွက်ရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များအား ရင်းနှီးပွင့်လင်းစွာ အမြင်ချင်းဖလှယ်ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။
တွေ့ဆုံပွဲအပြီးတွင် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့် နီပေါတပ်မတော်ကြည်းတပ်ဦးစီးချုပ်တို့သည် အမှတ်တရလက်ဆောင်ပစ္စည်းများ အပြန်အလှန်ပေးအပ်ကြပြီး တက်ရောက်လာကြသူများနှင့် အတူစုပေါင်း ဓာတ်ပုံရိုက်ကြသည်။
ဆက်လက်ပြီး တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် နှင့် ဇနီးဒေါ်ကြူကြူလှတို့က နီပေါတပ်မတော်ကြည်းတပ်ဦးစီးချုပ် General Rajendra Chhetri နှင့်ဇနီး Mrs. Rita Chhetri ဦးဆောင်သည့် ချစ်ကြည်ရေးကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား ဂုဏ်ပြုနေ့လယ်စာဖြင့်တည်ခင်းဧည့်ခံသည်။ ဦးစွာတပ်မတော်ဂုဏ်ပြု စစ်တီးဝိုင်းတပ်ဖွဲ့က နှစ်နိုင်ငံနိုင်ငံတော်သီချင်းများအားဂုဏ်ပြုတီးမှုတ်၍ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်က ကြိုဆိုနှုတ်ခွန်းဆက်စကားပြောကြားပြီး နီပေါတပ်မတော်ကြည်းတပ်ဦးစီးချုပ်က ကျေးဇူးတင်စကားပြန်လည် ပြောကြားသည်။
ယင်းနောက်နေ့လယ်စာအားအတူတကွသုံးဆောင်ကြသည်။ နေ့လယ်စာမသုံးဆောင်မီနှင့်သုံးဆောင်နေစဉ် အတွင်း ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးနှင့်စိတ်ဓာတ်စစ်ဆင်ရေး ညွှန်ကြားရေးမှူးရုံးကွပ်ကဲမှုအောက် မြ၀တီတေး ဂီတအဖွဲ့နှင့် ပြင်ဦးလွင်မြို့နယ်၊ နီပေါ၊ ဂေါ်ရခါးယဉ်ကျေးမှုအဖွဲ့တို့က နှစ်နိုင်ငံတေးသီချင်းများဖြင့် သီဆို၊ တီးမှုတ်၊ ကပြ ဖျော်ဖြေကြသည်။
နေ့လယ်စာသုံးဆောင်အပြီးတွင် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့် နီပေါတပ်မတော်ကြည်း တပ်ဦးစီးချုပ်တို့ သည် အမှတ်တရလက်ဆောင်ပစ္စည်းများ အပြန်အလှန်ပေးအပ်ကြသည်။ ထို့နောက်သီဆိုဖျော်ဖြေခဲ့ကြသည့် အဖွဲ့များအား ဂုဏ်ပြု လက်ဆောင်နှင့် ဂုဏ်ပြုပန်းခြင်းများပေးအပ်ပြီး အမှတ်တရစုပေါင်းဓာတ်ပုံရိုက်ခဲ့ကြသည်။
တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ ဗိုလျခြုပျမှူးကွီး မငျးအောငျလှိုငျသညျ နီပေါတပျမတျောကွညျးတပျဦးစီးခြုပျ General Rajendra Chheri အား ယနနေံ့နကျပိုငျးတှငျ နပွေညျတျောရှိ ဇယြောသီရိဗိမာနျရှေ့၌ ဂုဏျပွု တပျဖှဲ့ဖွငျ့ကွိုဆိုသညျ။
ဦးစှာ တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျနှငျ့ နီပေါတပျမတျောကွညျးတပျဦးစီးခြုပျတို့သညျ ဂုဏျပွုတပျဖှဲ့၏ အလေးပွုခွငျးကိုခံယူကွပွီး ဂုဏျပွုတပျဖှဲ့ကိုလိုကျလံ ကွညျ့ရှုစဈဆေးသညျ။ ယငျးနောကျ အခမျးအနားတကျ ရောကျလာကွသော နှဈနိုငျငံတပျမတျောအရာရှိကွီးမြားအား အပွနျအလှနျမိတျဆကျပေးကွသညျ။
အဆိုပါဂုဏျပွုကွိုဆိုပှဲသို့ တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျနှငျ့အတူ ဒုတိယတပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီး ခြုပျ ကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ(ကွညျး) ဒုတိယဗိုလျခြုပျမှူးကွီးစိုးဝငျး၊ ညှိနှိုငျးကှပျကဲရေးမှူး(ကွညျး၊ရေ၊လေ) ဗိုလျခြုပျကွီးမွထှနျးဦး၊ ကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ(လေ) ဗိုလျခြုပျကွီး မောငျမောငျကြျော၊ ကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ ရုံး(ကွညျး)မှ တပျမတျောအရာရှိကွီးမြားနှငျ့ နပွေညျတျောတိုငျးစဈဌာနခြုပျတိုငျးမှူးတို့ တကျရောကျ ကွပွီး နီပေါတပျမတျောကွညျးတပျဦးစီးခြုပျ နှငျ့အတူ မွနျမာနိုငျငံဆိုငျရာနီပေါ နိုငျငံသံအမတျကွီး H.E. Mr. Bhim K. Udas ၊ နီပေါတပျမတျောအရာရှိကွီးမြားတကျရောကျကွသညျ။
ထို့နောကျ နီပေါတပျမတျောကွညျးတပျဦးစီးခြုပျသညျ ဇယြောသီရိဗိမာနျ ဧညျ့သညျတျောမှတျတမျးစာအုပျတှငျ မှတျတမျးတငျလကျမှတျရေးထိုးပွီး တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျနှငျ့ ဧညျ့ခနျးမဆောငျ၌တှဆေုံ့ ဆှေးနှေး ကွသညျ။
ထိုသို့တှဆေုံ့ဆှေးနှေးရာတှငျ တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျက ယခုခဈြကွညျရေးခရီးစဉျသညျ မွနျမာ-နီပေါနှဈနိုငျငံဆကျဆံရေးနှငျ့ တပျမတျောနှဈရပျအကွားဆကျဆံရေးအတှကျ သမိုငျးဝငျခရီးစဉျတဈခုဖွဈပွီး နှဈနိုငျငံခဈြကွညျ ရငျးနှီးမှုတိုးတကျရေးအတှကျခွလှေမျးတဈရပျဖွဈကွောငျး၊ မိမိဦးဆောငျသညျ့မွနျမာ့ တပျမတျောခဈြကွညျရေးကိုယျစားလှယျအဖှဲ့ နီပေါနိုငျငံသို့ခဈြကွညျရေးခရီး လာရောကျစဉျက အကောငျးဆုံး ဖွဈအောငျဆောငျရှကျပေးခဲ့မှုမြားအပျေါ ကြေးဇူးတငျရှိပါကွောငျး၊ နှဈနိုငျငံနှငျ့နှဈနိုငျငံတပျမတျော နှဈရပျအကွား ခဈြကွညျရငျးနှီးမှုတိုးတကျ ခိုငျမာစရေေးအတှကျ ဆကျလကျဆောငျရှကျ သှားမညျဖွဈကွောငျး ပွောကွားသညျ။
ယငျးနောကျ ဧညျ့သညျတျော နီပေါတပျမတျောကွညျးတပျဦးစီးခြုပျက ယခုကဲ့သို့ တပျမတျောကာကှယျရေး ဦးစီးခြုပျ ဗိုလျခြုပျမှူးကွီးမငျးအောငျလှိုငျ၏ ဖိတျကွားခကျြအရ ခဈြကွညျရေးခရီးလာရောကျရသညျ့အတှကျ ကြေးဇူးတငျရှိပါကွောငျး၊ နီပေါကွညျးတပျဦးစီးခြုပျတဈဦးအနဖွေငျ့ မွနျမာနိုငျငံသို့ပထမဦးဆုံးအကွိမျ လာရောကျသညျ့ခဈြကွညျရေး ခရီးစဉျဖွဈပါကွောငျး၊ ယခုကဲ့သို့ခဈြကွညျရေးခရီးစဉျမြား အပွနျအလှနျ လညျပတျခွငျးဖွငျ့ နှဈနိုငျငံနှငျ့နှဈနိုငျငံတပျမတျောနှဈရပျအကွားခဈြကွညျရငျးနှီးမှုမြား ပိုမိုတိုးတကျခိုငျမာလာ မညျဟုယုံကွညျပါကွောငျး၊ ယခုကဲ့သို့ရငျးနှီးနှေးထှေးစှာကွိုဆိုမှုမြားကိုလညျး ကြေးဇူးတငျရှိပါကွောငျး ပွောကွားသညျ။
ထို့နောကျ နှဈနိုငျငံနှငျ့ နှဈနိုငျငံတပျမတျောနှဈရပျအကွားခဈြကွညျရငျးနှီးမှု တိုးမွှငျ့ဆောငျရှကျရေးနှငျ့ ကုနျသှယျမှုမွှငျ့တငျရေးဆိုငျရာကိစ်စရပျမြား၊ နှဈနိုငျငံတပျမတျောနှဈရပျအကွား စဈဘကျဆိုငျရာ သငျတနျးမြား အပွနျအလှနျစလှေတျရေး၊ ဆေးဘကျနညျးပညာမြား၊ သဘာဝဘေးအန်တရာယျကာကှယျရေးနှငျ့ အခွားကိစ်စ ရပျမြားတှငျ အပွနျအလှနျပူးပေါငျးဆောငျရှကျရေး၊ ယဉျကြေးမှုအဖှဲ့မြားနှငျ့ အားကစားအဖှဲ့မြား အပွနျအလှနျ စလှေတျရေး၊ နီပေါနိုငျငံရှိ ကုလသမဂ်ဂငွိမျးခမျြးမှုထိနျးသိမျးရေး သငျတနျးကြောငျးတှငျ မွနျမာ့တပျမတျောမှ သငျတနျးသားမြားတကျရောကျရေး၊ ဘာသာစကားဆိုငျရာ သငျတနျးမြားအပွနျအလှနျစလှေတျရေး၊ မွနျမာ နိုငျငံ၏ထာဝရငွိမျးခမျြးရေးရရှိစရေနျအတှကျ တပျမတျောမှဆောငျရှကျနမှေုအခွအေနမြေားနှငျ့ နှဈနိုငျငံ တပျမတျောနှဈရပျအကွားခဈြကွညျရငျးနှီးမှုတိုးမွှငျ့ဆောငျရှကျရေးဆိုငျရာကိစ်စရပျမြားအား ရငျးနှီးပှငျ့လငျးစှာ အမွငျခငျြးဖလှယျဆှေးနှေးခဲ့ကွသညျ။
တှဆေုံ့ပှဲအပွီးတှငျ တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျနှငျ့ နီပေါတပျမတျောကွညျးတပျဦးစီးခြုပျတို့သညျ အမှတျတရလကျဆောငျပစ်စညျးမြား အပွနျအလှနျပေးအပျကွပွီး တကျရောကျလာကွသူမြားနှငျ့ အတူစုပေါငျး ဓာတျပုံရိုကျကွသညျ။
ဆကျလကျပွီး တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ ဗိုလျခြုပျမှူးကွီး မငျးအောငျလှိုငျ နှငျ့ ဇနီးဒျေါကွူကွူလှတို့က နီပေါတပျမတျောကွညျးတပျဦးစီးခြုပျ General Rajendra Chhetri နှငျ့ဇနီး Mrs. Rita Chhetri ဦးဆောငျသညျ့ ခဈြကွညျရေးကိုယျစားလှယျအဖှဲ့အား ဂုဏျပွုနလေ့ယျစာဖွငျ့တညျခငျးဧညျ့ခံသညျ။ ဦးစှာတပျမတျောဂုဏျပွု စဈတီးဝိုငျးတပျဖှဲ့က နှဈနိုငျငံနိုငျငံတျောသီခငျြးမြားအားဂုဏျပွုတီးမှုတျ၍ တပျမတျောကာကှယျရေး ဦးစီးခြုပျက ကွိုဆိုနှုတျခှနျးဆကျစကားပွောကွားပွီး နီပေါတပျမတျောကွညျးတပျဦးစီးခြုပျက ကြေးဇူးတငျစကားပွနျလညျ ပွောကွားသညျ။
ယငျးနောကျနလေ့ယျစာအားအတူတကှသုံးဆောငျကွသညျ။ နလေ့ယျစာမသုံးဆောငျမီနှငျ့သုံးဆောငျနစေဉျ အတှငျး ပွညျသူ့ဆကျဆံရေးနှငျ့စိတျဓာတျစဈဆငျရေး ညှနျကွားရေးမှူးရုံးကှပျကဲမှုအောကျ မွဝတီတေး ဂီတအဖှဲ့နှငျ့ ပွငျဦးလှငျမွို့နယျ၊ နီပေါ၊ ဂျေါရခါးယဉျကြေးမှုအဖှဲ့တို့က နှဈနိုငျငံတေးသီခငျြးမြားဖွငျ့ သီဆို၊ တီးမှုတျ၊ ကပွ ဖြျောဖွကွေသညျ။
နလေ့ယျစာသုံးဆောငျအပွီးတှငျ တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျနှငျ့ နီပေါတပျမတျောကွညျး တပျဦးစီးခြုပျတို့ သညျ အမှတျတရလကျဆောငျပစ်စညျးမြား အပွနျအလှနျပေးအပျကွသညျ။ ထို့နောကျသီဆိုဖြျောဖွခေဲ့ကွသညျ့ အဖှဲ့မြားအား ဂုဏျပွု လကျဆောငျနှငျ့ ဂုဏျပွုပနျးခွငျးမြားပေးအပျပွီး အမှတျတရစုပေါငျးဓာတျပုံရိုကျခဲ့ကွသညျ။
မတ် ၉၊ ၂၀၂၀ Admin 0